13 YAKANAKISA REKODHI KUREKODHA SOFTWARE YEMAC - NYORO
13 Yakanakisa Rekodhi Kurekodha Software yeMac
Audio ndiwo musana weruzha nemimhanzi indasitiri. Mumwe nemumwe munhu anoda kuve anotevera Kishore Kumar kana Lata Mangeshkar wenyika yemimhanzi. Kuzivikanwa semuimbi akanakisa kana redhiyo jockey kana akanakisa kuenzanisa pachirongwa cheTV kana inotevera indie DJ inoratidzira iye akanakisa DJ weboka rakazvimirira repapoka kana kambani yemufirimu kana kutanga yako podcast. Mune mamwe mazwi, ingave nyanzvi kana amateur, izwi modulation tekinoroji inova inofanirwa.
Zvekuenzanisira kwezwi, zvakakosha kuti uve neyakajeka uye yakanaka odhiyo yekurekodha software. Iyi odhiyo yekurekodha software inoteedzera odhiyo kuti iwedzere mhedzisiro kuizwi uye iite hunyanzvi kuenzanisa izvo chaizvo zvinodiwa zveprojekti. Sezvinoonekwa mune yemimhanzi nyika software iyi inogona kushandiswa kune akawanda-track kurekodha, kurira kusanganisa, uye kugadzirisa. Iyi software inogona kusanganisa izwi rakanyorwa uchishandisa maikorofoni, mune ruzha uye inogona zvakare kuita rekodhi kurekodha.
2. Bhandi regaraji
4. Rakareruka sahwira
5. Pro Zvishandiso Kutanga
8. Macsome Audio sahwira
12. Audio Kubiwa
13. Chinyorwa Chekuteerera
Iyi software inogona kushandiswa paWindows, Mac, Linux, kana chero sisitimu yekushandisa. Tichaganhurira hurukuro yedu, yazvino, kune akanakisa odhiyo yekurekodha software yeMac. Rondedzero yemamwe akanakisa odhiyo ekurekodha software zvirongwa zveMac zvakatsanangurwa pazasi:
Audacity, yakanakira - kurekodha izwi pamusoro uye kugadzirisa, inowanika kuMac Os, Windows & Linux
Garageband, yakanakira - kurekodha odhiyo yekugadzirwa kwemimhanzi, inowanikwa yeMac OS chete
Macsome Audio sahwira
Ngatitarisei chimwe nechimwe chezvirongwa zvakanyorwa pamusoro zvakadzama sezviri pazasi:
Iyo yemahara yemutengo software yakaburitswa kuti ishandiswe kwevatangi, mugore ra2000, ndeimwe yeanonyanya kufarirwa akanyanya odhiyo ekurekodha software yeMac. Iwe unogona nyore kugadzirisa uye kusanganisa rwiyo. Chikamu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kutarisa ruzha uye kururongedza chikamu nechikamu. Iine ayo akavakirwa-mukati maficha senge akaenzana, kukanda, kunonoka, uye reverb, unogona kuburitsa studio-mhando mhere. Iyo ndiyo yakakwana software yeva podcasters kana vagadziri vemimhanzi.
Iyo chete yekudzosera yakambogadziriswa uye kusanganisa kwaitwa iwe haugone kudzosera shanduko, kana iwe uchida kuita chero shanduko, iko kuvhiya hakugadziriswe. Chimwe chinokanganisa software iyi ndechekuti haigone kurodha maMP3 mafaira. Kunyangwe paine zvipingaidzo izvi, nekuda kweye yakanaka mushandisi-inoshamwaridzika interface, ichiri kutariswa pakati peiyo yepamusoro 3 software yekuteerera odhiyo. Iyo zvakare inowanikwa yeWindows uye Linux anoshanda masystem.
Iyi software yakagadziridzwa na'Apple 'uye yakaburitswa muna2004, inowedzera yakazara, isina mutengo, yedhijitari odhiyo Workstation inopfuura yedhijitari odhiyo odhita. Zvikurukuru zveMac OS, ine yakapusa mushandisi interface, ndeimwe yeakanakisa software yeavo novice, avo vatsva mumunda wekurekodha odhiyo. Iwe unogona pasina chero kunetseka kugadzira uye kurekodha akawanda matraki. Makwara ese ane mavara-akanyorwa.
Nema filters akavakirwa-mukati uye akareruka dhonza uye kudonhedza maitiro, odhiyo matriki anogona kupihwa akasiyana mhedzisiro senge kukanganisa, reverb, echo, uye zvimwe zvakawanda. Iwe unogona kugadzira ako mhedzisiro kunze kweiyo renji inbuilt preset mhedzisiro yekusarudza kubva. Iyo zvakare inopa studio-mhando mhando yemimhanzi chiridzwa mhedzisiro. Iine yakatemwa sampuro chiyero che44.1 kHz, inogona kurekodha pa16 kana 24-bit odhiyo resolution.
Icho chiri chemahara kurekodha software kune mushandisi mutsva, muimbi wega, kana mudzidzi wekukoreji anoda kuenda kune dzimwe nzira dzake pasocial media. Iyi ndiyo yakanyanya kunaka Mac software yeakajairwa odhiyo yekurekodha. Kunyangwe iine nyore mushandisi interface, haina kukodzera kune nyanzvi. Iyi software inowanikwa nyore nyore pa browser uye haufanire kurodha chero hombe chirongwa faira.
Nekudaro, uchishandisa iro gore iwe unogona kurekodha, kucheka, kuteedzera, kunama, uye kurima yako odhiyo uye kushandisa akakosha mhedzisiro kune yako odhiyo pane yako yemagariro media account. Inogona kushandisa zvese zvekunze uye yayo-yakavakirwa mike yekurekodha. Kukanganisa kwesoftware iyi hakubvumidze kuwanda-kuteedzera uye kune kumbomira kurekodha ficha.
Kuenda nezita rayo iri nyore chaizvo uye inokurumidza nzira yekuteerera kurekodha muMac. Iko mahara kurodha pasi software, kana yakambotorwa, iyo icon yeiri nyore rekodhi inowanikwa pakona yepamusoro kurudyi pane bar yemenyu. Iwe unogona kutanga kurekodha nekamwechete mbeva. Izvo hazvikurudzirwe kushandiswa kwevanyanzvi asi zvinogona kubatsira kune wepakati mushandisi.
Kubva pamenyu inodonhedza, unogona kusarudza sosi yekurekodha kureva ekunze mike kana iyo Mac yakavakirwa mukati mike. Iwe unogona kuseta vhoriyamu yekurekodha uye kubva pachikamu chezvaunofarira, unogona kutora fomati yekurekodha kana MP3 faira, M4A , kana chero fomati iripo yesarudzo yako. Iwe unogona zvakare kusarudza muyero rate uye chiteshi etc.etc.
Dhawunorodha Rakareruka Rekodhi
Ichi chishandiso chinogona kutorwa pasi nekuiswa mahara pasina mutengo uye ndeimwe yeakanakisa software yevechidiki chizvarwa chevaimbi vatsva nevaimbi vatsva kumodhiyo yekurekodha indasitiri. Yakanga iine mashoma matatu matatu enhepfenyuro ekurekodha odhiyo kuti ichengetedzwe imomo asi ikozvino wave nekwaniso ku1GB yekuchengetera kwemahara pagore kuwedzera kune gumi nembiri zviridzwa, gumi nematanhatu emateedzera, uye zvishandiso zvina. Izvo chaizvo hazvibvumidze zvemuno zvekuchengetedza odhiyo marekodhi pane yako hard disk.
Uyezve Verenga: 14 Best Manga Reader Mapurogiramu eApple
Iyo inogona kurekodha pa16 kusvika 32-bit odhiyo resolution pane yakatemwa muyero muyero we96KHz ichibvumidza kune nyanzvi yekugadzira odhiyo. Iyo inopa makumi maviri nematatu mhedzisiro, ekurira processor, uye chaiwo zviridzwa uye 500MB ye loop loop.
Dhawunirodha ProTools Kutanga
Zviri nyore kushandisa odhiyo yekurekodha software yeMac. Iyo inoshanda zvakanyanya ichibvumidza kune yakawanda-track kurekodha uye track kusanganisa neiri nyore kushandisa mushandisi interface. Icho chinhu chakazara-chakazadzwa Dhijitari Audio Workstation pachawo. Unogona kuendesa mafaera kana MIDI.
Iwe unogona kuita risingagumi rwiyo rwekurekodha uye unogona kuyambuka, kushandura iwo akanyorwa maturu nemamwe akawanda sarudzo senge Routing, Inline Plugin Kudzora, nezvimwe muchikamu chinosanganisa. Iyo inodakadza kwazvo software yeavo mainjiniya sezvo ivo vachigona kushandisa ayo maficha kune kugona kwavo kupa mamwe akanakisa odhiyo marekodhi uye izwi modulations.
windows 10 nhema screen ine cursor gadzirisa
Icho chipiyaniso-chikuva chinoreva kunze kweMac OS chinogona kushanda kune mamwe masisitimu anoshanda futi. Iyo yakanaka uye inokurumidza odhiyo yekurekodha cum yekugadzirisa software. Iine mushandisi-inoshamwaridzika interface, inogona kuita yakakosha kune yakanyanya yepamusoro odhiyo yekurekodha zvichienderana novice kana nyanzvi ichishandisa iyo. Iyo yakazara odhiyo odhiyo spectrum analyzer uye anopfuura makumi matatu nematanhatu band equalizers, flanger, iyo chorus inogona kubatsira kubatsira kuvandudza iyo mune chairo-nguva yekushandisa.
Iyo odhiyo spectrum analyzer inogona kucheka mativi akasiyana eodhiyo kuti uiongorore uye nekuwedzera mhedzisiro pairi kuitira kuti iwe ugone kuisa zvakafanana mhedzisiro kamwechete uye uine chaiyo-nguva yekutamba yemhedzisiro.
Inoenderana nemafomati mazhinji senge MP3, WAV, nezvimwewo uyezve inotsigira yakawanda VST plug-ins. Chikamu chakanakisa ndechekuti mabasa ese anotora nguva sekuvhura uye kusevha mafaera ekuteerera kana kushandisa mhedzisiro haikoshese basa rako rezuva nezuva paPC asi isoftware inoteerera inoramba ichimhanya kumashure, ichiita basa rayo pasina kukanganisa yako.
Icho chinyorwa chekuteerera cheMac OS X. Icho chimwe cheizwi rerekodhi rinogona kurekodha kubva kwakasiyana senge Mac yemukati maikorofoni, iyo yekunze mike, mamwe maapps paMac, uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa senge odhiyo kubva kumaDVD, machats ezwi nezvimwe. .etc. Icho chiri, nekuda kweichi chikonzero, icho chiri pakati pezvakanakisa odhiyo rekodhi asi kwete yakasimba kwazvo mushandisi interface. Runako rwe software iyi ndechekuti kunyangwe iri yekutaura, mumhanzi, kana podcast yayo yekurekodha kugona kwakafanana mune ese matatu modes.
Kune iri nani faira kurongeka, inopa maID tag kazhinji asiri anopfuura rimwe kana matatu mazwi achipa ruzivo nezve gwaro, zvichiita kuti zvive nyore kuwana iyo dijitari faira pazvinodiwa. Unogona kutanga kurekodha izwi ipapo ipapo uchishandisa kamwe chete. Izvo hazviite, mune izvi, kutendera kutambisa nguva mukurekodha uye nzvimbo yeipi faira. Izvo chete zvinokanganisa ndezvekuti hazvizvigadzirise pachazvo kuti zvishande pane zviwanikwa zvishoma.
Dhawunirodha Macsome Audio Recorder
TunesGo zvakanaka Audio zvakarekodha Software kuti kutsikisa nokuda Mac. Iyo yemahara yemutengo wemimhanzi inoridza. Iwe unogona kuteerera kune ako aunofarira nziyo, komedhi TV inoratidza, nhau, podcast, uye zvimwe kubva kune yako iPhone / iPod / iPad. Iwe unogona kuseta yako yemhando marongero ekuita ako ekurekodha.
Uyezve Verenga: 10 Best Emulators eWindows yeWindows uye Mac
Nehunyanzvi, inogona kusiyanisa matraki painorekodha uye chikamu chakanakisa haufanire kumaka faira reodhiyo rekuchengetedza. Iyo inozvimaka yega faira rekuteerera zvichienderana nekuti iri odhiyo kana mimhanzi faira nekuisa zita remukurukuri kana muimbi, zita realbhamu, uye zita rerwiyo. Izvi zvinobatsira mukugadzirwa kuri nyore kwe playlist kana raibhurari yemavhidhiyo akanyorwa. Kugadzirisa kurekodha kwako kunobatsira kugadzirisa marongero ako ehunhu zvichienderana nezvinodiwa nezvaunoda.
RecordPad iri lightweight, chete 650KB, iri nyore kushandisa, nekukurumidza uye nyore odhiyo yekurekodha software. Iyo yakanaka software yekuratidzira nedhijitari mameseji. Iyo inogona kurekodha kubva kune ese maviri maInbuilt maikorofoni yemukati uye nezvimwe zvekunze zvigadzirwa. Inoenderana neakasiyana mafomati mafomati senge MP3, WAV, AIFF, nezvimwewo. Unogona zvakare kusarudza muyero wero, chiteshi, nezvimwe uye nekuisa marekodhi ako uchishandisa akasiyana paramende semafomati, mazuva, nguva, uye saizi. Mamwe mabhenefiti eiri software seanoratidzwa pazasi:
Uchishandisa Express Burn, unogona kupisa zvakananga zvinyorwa kuCD.
Paunenge uchishanda pane zvimwe zvirongwa paPC yako, unogona kuenderera mberi nekuchengetedza kudzora kwako kurekodha uchishandisa stem-wide hotkeys.
Iwe une sarudzo yekutumira marekodhi kuburikidza neemail kana kurodha kune iyo FTP server
Izvo zviri nyore kwazvo uye yakasimba kurekodha software kune ese ehunyanzvi uye emakambani ekushandisa
Iyi software inogona kugadzirisa marekodhi uye kuwedzera mhedzisiro kana ikashandiswa pamwe chete neWavePad Professional odhiyo yekugadzirisa software
Iyo yakapusa inbuilt odhiyo yekurekodha sisitimu neMac OS. Iyo ine yakapusa Mushandisi interface ichiita kuti zvive nyore kushanda. Iyo inokutendera iwe kurekodha uchishandisa Mac yemukati maikorofoni uye zvakare yekunze Mike kana system odhiyo. Iwe unogona kuchinja mhando yekurekodha pamwe nesarudzo dzepamusoro uye dzakanyanya. Unogona kutarisa saizi yako faira se software inorekodha chirongwa chako. Iyo software inotengesa kunze yako faira kune MPEG-4 fomati, kana iko kurekodha kwapera.
Imwe yezvipingamupinyi zve software iyi ndeyekuti ine mashoma masarudzo ekugadzirisa. Iyo haina chero kupihwa kwekumbomira odhiyo yekurekodha uye inogona kungoimisa uye kutanga imwe nyowani. Nekuda kwezvikanganiso izvi, hazvikurudzirwe sehunyanzvi odhiyo yekurekodha software asi zvakanaka kune vapindiri.
Yakagadziriswa naRogue Amoeba, iyi software ndeye mahara kurodha pasi nemazuva gumi nemashanu kuyedza nguva. Iyo ndeimwe yeakanakisa odhiyo yekurekodha software yeMac uye inogona kurekodha odhiyo kubva kune akawanda maficha senge internet redhiyo kana DVD odhiyo kana webhu eg. zvakanaka pakunyora kubvunzurudzwa pa Skype nezvimwe.
Iine inoshamisira mushandisi interface, iyo Audio Hijack rekodhi inobvumira odhiyo kurekodha kubva kuMac yemukati mike, chero yekunze mike, kana chero imwe yekunze app ine kurira. Iyo ine inbuilt kugona kugadzirisa vhoriyamu uye kuwedzera mhedzisiro uye mafirita.
Iyo inogona kutsigira akawanda mafomati senge MP3 kana AAC kana chero imwe odhiyo faira yekuwedzera. Chikamu chakanakisa nezve software iyi ndechekuti odhiyo yekurekodha iri kudzivirirwa. Iyi ficha ibhonasi hombe sezvo iwe usinga zorekete odhiyo kunyangwe iyo software ikapunzika uchinyora.
Dhawunirodha Audio Kubiwa
Iyo yakanakisa kurekodha software iyo inorekodha uye inobvumirana manotsi. Inowanikwa nemutengo paMac Appstore. Paunotanga kunyora manotsi pane ino sisitimu kana chishandiso inozoenderana neodhiyo wotanga kurekodha hurukuro, kubvunzurudza, kana hurukuro. Iyo sarudzo inosarudzwa nemudzidzi pamwe nehunyanzvi nharaunda, zvakafanana.
Yakurudzirwa: 17 Akanakisa Adblock Bhurawuza eApple (2020)
Iyo zvakare ine maficha senge zvinyorwa, zvimiro, zvirevo, uye zvimwe zvakawanda kuitira kuti iwe ugone kuzvishandisa kana zvichidikanwa pakuita zvinyorwa. Kamwe kuburikidza nekugadzira zvinyorwa iwe unogona kuzvishandura kuita zvinyorwa zvePDF zvakare. Iwo manotsi anogona kuchengetwa pane iro gore. Panguva ipi neipi gare gare paunotamba, iwe unogona kuteerera kune odhiyo uye mu tandem ona ese manotsi pachiratidzowo.
Dhawunirodha Audio Note
Rondedzero yeakanakisa odhiyo yekurekodha software yeMac haina kupera. Kupedzisa, hazvingaruramisirwe kuvhara hurukuro yangu pane akanakisa odhiyo yekurekodha software yeMac, pasina kutaurwa kune mashoma mamwe software senge Piezo, Reaper 5, Leawo mimhanzi rekodha uye Traverso., Iyi software, kuwedzera kune izvo zvakadzama. pamusoro, shandisa odhiyo kuti uwedzere mhedzisiro uye nekuenzanisira izwi, uchitaurisa kutaura kwakanyorwa, mimhanzi kana dhijitari mharidzo.
windows 10 bhuti kukanganisa 0xc00000f
spam tabu kuvhura otomatiki
nei chrome ichimira kushanda
kumanikidza kufambisa maapps ku sd kadhi
chrome windows 10 isiri kushanda
windows 10 inomira pa 99